विश्व कला जगत्मा हामी जानैपर्छ :कुलपति कर्माचार्य «
काठमाडौँ, २० पुस । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान(नाफा)मा तेस्रो कुलपतिका रुपमा कलाकार कान्छाकुमार कर्माचार्य नियुक्त हुनुभएको छ । विसं २००४ मा जन्मनुभएका कर्माचार्य २०६६ सालमा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव बन्नुभएको थियो । विसं २०२१ देखि चित्रकला साधनामा लाग्नुभएका उहाँसँग कला क्षेत्रका सङ्घसंस्थामा विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । उनै केके कर्माचार्यसँग ललितकलाको विकास र चुनौतीका विषयमा आज राससले कुरा गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग राससका प्रधानसम्पादक श्याम रिमाल र उपसमाचारदाता नारायण ढुङ्गानाले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
कार्यक्रम पारित भएको हो । त्यो कार्यक्रम अगाडि गइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । फलोअप(अनुगमन) गर्नुपर्छ । त्यसै त हुँदैन यहाँले माथि भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रदर्शनीको कुरा, तर अब त तयारी गर्नुपर्ने हो, ढिला भएन र ? जेठ २ गते हुने हो पहिले पहिले कार्यक्रम । पछि आएर चाहिँ यो अघिको कार्यकालमा भदौमा पुग्यो । भूकम्पलगायत भौतिक समस्याले सरेको हो । व्यवस्था गर्न गाह्रो छ, कुरा गर्नलाई पो सजिलो छ । अब आउने वर्ष गर्ने सोचाइ छ । चार पाँच महिना बाँकी छ । त्यतिमा भएन भने पनि सारेर गर्ने हो । त्यसलाई नियमित रुपमा गर्नुपर्छ तर चार वर्षभित्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
दुवै गर्नुपर्छ । ट्रेडिशनल(परम्परागत) भनेको हाम्रो आफ्नो पहिचान हो । समसामयिक भनेको विश्वको आजको स्थिति हो । हाम्रो पहिचानको हिसाबले चाहिंँ परम्परागत, मिथिला, पौभा, हाम्रै जनजातिका कलाकारका राम्रा राम्रा कलाहरु छन् । यस्तालाई हामीले प्रमोशन(प्रवद्र्धन) गर्नुपर्छ । बाहिर लगेर प्रचारप्रसार पनि गर्नुपर्छ । प्रसङ्ग फेरौंँ, नेपाली कला समीक्षाको स्थिति यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ ? हाम्रा समीक्षकहरुलाई तालीम–प्रशिक्षणको आवश्यकता देख्नु हुन्छ ?
एकदम आवश्यकता छ । कला समीक्षा क्षमता हामीकहाँ अहिलेसम्म पूर्ण छैन । कला समीक्षाको अभाव पक्कै छ । जान्ने र सिकाउने समीक्षकबाट नै हो । समीक्षा धेरथोर नभएको होइन, पहिलभन्दा विकास नभएको होइन तर पर्याप्त छैन । आर्ट राइटिङको अभाव छ । पाठ्यक्रममा नेपाली किताब पाइँदैन, विदेशी किताब राख्नुपरेको छ । मैले कति विद्यार्थीलाई अरनिकोबारे सोध्दा था छैन भने, बरु पिकासो थाहा छ, रेब्रान्ट थाहा छ । यसबारे यो एकेडेमीले केही हदसम्म गरेको छ । फेरि पनि गर्छाैँ । नेपाली कलाको सिलसिलाबद्ध इतिहासलेखन नारायणबहादुर सिंहबाट शुरु भएको थियो । यस्तो लेखन र अन्य प्रकाशनबारे नाफाले के गर्दै छ ?
इतिहास छैन, कलाकारको परिचय छ । त्यसमा पुरानाहरुको छैन, जीवित मात्रैको छ । यतिले पर्याप्त छैन । ऐतिहासिक, पुरातात्विक र कलाका दृष्टिले महत्वपूर्ण धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरीलगायतको पुनःनिर्माणमा कलाकारहरुको आवाज उठेको देखिंँदैन नि ? उठेको छ तर यो जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ भएन । सम्पदा जोगाउनुपर्छ, यो कलासँग सम्बन्धित हो भन्ने छ तर यसको जिम्मेवारी पुरातत्व विभागको हो । तिनको पुनःनिर्माणमा हामी पनि सहभागी होआँै भन्ने भन्ने कुरा आए जस्तो लाग्दैन, पुराना कलाकारले काम पाए होलान् तर नयाँलाई पारिश्रमिक दिएर आह्वान गरे जस्तो लाग्दैन ?
कलाकारको एउटा सधैंँको गुनासो छ, नाफाले नयाँ काम र कला क्षेत्रको विकासमा मौलिक काम गर्न सकेन भन्ने छ । त्यसो होइन । अब केही गर्छौंँ । कलाकारको आवास अझै बनाउन सकिएको छैन । योजना धेरै छ । सबैको सहयोगको खाँचो छ । सङ्गीत एकेडेमीले जस्तो कलाकारको परिचयपत्र र नेपाल एकेडेमीको जस्तो आजीवन सदस्यता दिने विषयमा के योजना छ ? परिचयपत्रको कुरा हामी पनि गर्छौं । आजीवन सदस्यताको कुरा चाहिँ भएको छैन । हामी पनि त्यो चाहन्छौंँ तर यसमा सरकारले बजेटल दिनुप¥यो, अर्थ मन्त्रालयले वास्ता गरिदिएन । कलाकार कल्याणकोष बनाऔँ भन्ने छ तर अक्षयकोष अलिकति मात्र छ ।
हामीसँग ऐन छ । यसमा बसेर नियम बनाउनुपर्छ, त्यो मेरो सोचमा छ । अब हामी बनाउँछौं । विश्वका कला सङ्घसंस्थासँग नाफाको संस्थागत सम्बन्ध भएको देखिंँदैेन नि ? हाम्रो सम्बन्ध चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कासँग भएको छ । युरोप, अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध बढाउने कोशिश गर्छु । त्यो सम्बन्ध नभईकन हाम्रो अस्तित्व नै हुन्न । रासस